နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ်-အိန္ဒိယ-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြန့် တို့နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သတင်းထောက်၏ မေးမြန်းမှုအား ဖြေကြား（၂）
မေး - သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်မှာ “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (the Belt and Road) နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ်-အိန္ဒိယ-မြန်မာ စီးပွားရေး စင်္ကြန့်တည်ဆောက်ရေး ရည်းမှန်းချက်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပိုမိုများပြားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ?
ဖြေ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ် ဟာဆီနာသည် ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့မှ ၅ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်ဟာ ဟာဆီနာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ပြန်လည်အရွေးချယ်ခံရပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံကို လာရောက်တဲ့ ပထမဦးဆုံး ခရီးစဉ်လည်းဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ် ဟာဆီနာသည် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၊ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်၊ ပါတီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Mr. Li Zhan Shu တို့နဲ့ အသီးသီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စာရွက်စာတမ်းများအား လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် “တရုတ်-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်” ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ နေပြီး အသေးစိတ်သတင်းတွေကို ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖတ်လို့ရပါတယ်။
ခုနကမေးသွားတဲ့မေးခွန်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ဒီနေရာမှာ အနည်းငယ် ပြန်လည်ဖြေကြားလိုပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဟာဆီနာဟာ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်၊ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန် တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်အတွင်း “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (the Belt and Road” တည်ဆောက်မှုတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လိုကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင် တွေဟာ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာနိုင်ငံတို့နဲ့အတူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ်-အိန္ဒိယ-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြန့် တည်ဆောက်မှုအား သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။
“ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (the Belt and Road) အဆိုပြုချက်သည် အဖွဲ့ဝင်များအတွက် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံအား ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပြီး၊ ဒေသ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးပေါင်းစပ်ခြင်း အခွင့်အလမ်းသစ်များ ယူဆောင်ပေးမည်ဟု တရုတ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ လုံးမှ ယုံကြည်လျက်ကြသည်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် “ရပ်ဝန်းတစ်ခု၊ လမ်းကြောင်းတစ်သွယ်” (the Belt and Road) အဆိုပြုချက်အား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်၊ အတူတကွ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအား အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးပြု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အားသာချက်များအား အပြန်အလှန် ဖြည့်စွက်ကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အား အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံသည် မိရိုးဖလာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိတွင် နှစ်နိုင်ငံလုံးသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အရေးပါသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလျက်ရှိသည်။ နှစ်နိုင်ငံ မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးအား ပိုမိုခိုင်ခံ့စေရန်၊ တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ကိုက်ညီသည်သာမက အာရှတိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် ကမ္ဘာကြီး တံခါးဖွင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
မေး - မလေးရှားနိုင်ငံက တရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ ငွေကြေးကို သိမ်းဆည်းလိုက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး တရုတ်နိုင်ငံကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း ရှိပါသလားခင်ဗျာ? တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မည်ကဲ့သို့ တန်ပြန် ဆောင်ရွက်မလဲခင်ဗျာ?
ဖြေ - ခုနက သတင်းထောက်ရဲ့ မေးမြန်းမှုကို တစ်ကြိမ်ဖြေကြားပြီးပါပြီ။ ဒီစီမံကိန်းဟာ နှစ်ဖက် သဘောတူစာချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် နေတာပါ။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြဿနာကို နှစ်နိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း တဲ့ပုံစံနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထပ်ပြီး ကျွန်တော်ပြောကြားလိုတာက တရုတ်နဲ့ မလေးရှား နှစ်နိုင်ငံအကြားမှာ ကာလကြာရှည်နေပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆက်ဆံရေးရှိပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာလည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာတွေရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် အတူတကွ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေပြီး နှစ်နိုင်ငံပြည်သူ ကို ပိုမိုအကျိုးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး - တနင်္လာနေ့ညမှာ EU ကောင်စီကနေပြီး တူရကီနဲ့ ဆိုက်ပရပ်အကြား သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန် ရေပြင် မှာ သယံဇာတတူးဖော်မှု အငြင်းပွားမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တူရကီအဆင့်မြင့်ပိုင်းနှင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ အခုလိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဟာ မြေထဲပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းဒေသမှာ တူရကီနိုင်ငံရဲ့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမှုကို ထိခိုက်စေမှာ မဟုတ်ဘူးဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရေပြင်မှာ ရေနံတွင်းတူးဖော်ခွင့်ရှိကြောင်း တူရကီဖက်က အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆိုက်ပရပ်ဖက်ကတော့ အခုလိုလုပ်ရပ်ကို ရန်စတဲ့ အပြုအမူလို့ ယူဆပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေကြောင့် အဆိုပါဒေသမှာ ပိုမိုပြင်းထန်သည့် အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွားမှာကို တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ စိုးရိမ်ပါသလားခင်ဗျာ?
ဖြေ - တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့် လျက်ရှိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ဆိုက်ပရပ်၊ တူရကီ နှစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုဆက်ဆံရေး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို အောင့်သိပ်ချုပ်ထိန်းကာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုကို မကြီးထွားလာ စေရန် ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟု အကြံပြုသည်။
မေး - တနင်္လာနေ့မှာ ဘရာဇီးက နိုင်ငံတွင်း 5G Network တည်ဆောက်မှုမှာ Hawei ကုမ္ပဏီကို ပိတ်ပင် ခြင်းမရှိပါဘူးလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ Huawei ရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ ယူဆပါသလား? တရုတ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာများပြောကြားလိုပါသလဲ?
ဖြေ - ဒါဟာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Huawei ကုမ္ပဏီကို သွားမေးသင့်ပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုယူဆလဲဆိုတာ။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခင်ဗျာကိုပြောပြနိုင်တာက Huawei အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာပြီး ပြင်ပနဲ့ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို အစဉ်တစ်ဆက် အားပေးထောက်ခံပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်တဲ့ဒေသရဲ့ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အဆိုပါဒေသမှာ မျှတပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းရှင်းကာ ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းမရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်အတွက် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
ဘရားဇီးနိုင်ငံရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ဒါဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လတ်တစ်လောမှာ သတိထားမိကြမှာပါ၊ ပိုမိုများပြားတဲ့ နိုင်ငံတှဟော တရုတ်နိုင်ငံက သိပ္ပံနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကို သူတို့နိုင်ငံရဲ့ 5G Network တည်ဆောက်မှု မှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်အများစုဟာ မိမိကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
မေး - ခုနက ပြောကြားသွားတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ်-အိန္ဒိယ-မြန်မာ စင်္ကြန့်နဲ့စပ်လျဉ်းပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ ကျန်ရှိတဲ့ အခြားနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာတို့နဲ့ ဆွေးနွေးမှု ရှိပါသလားခင်ဗျာ?
ဖြေ - ခင်ဗျာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-တရုတ်-အိန္ဒိယ-မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြန့် တည်ဆောက်မှုအခြေအနေကို အတော်စိတ်ဝင်စားတာပဲ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တာက တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ စီးပွားရေးစင်္ကြန့် တည်ဆောက်မှုနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတို့နဲ့ အမြဲမပြတ် အဆက်အသွယ် ထားရှိပြီး ညှိနှိုင်းပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးစင်္ကြန့်တည်ဆောက်မှုဟာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ့ကိုက်ညီပြီး sub-region တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးရဲ့ ဘုံအကျိုးစီးပွားနဲ့လဲ ကိုက်ညီပါ တယ်။